गोंगबुँ साहित्य समाजमा काव्य वाचन::KhojOnline.com
गोंगबुँ साहित्य समाजमा काव्य वाचन
काठमाडौं, माघ २७ गते
गोंगबुँ साहित्य समाजको २२ औं नियमित काव्य वाचन श्रृङ्खला लुनार स्कुलमा सम्पन्न भयो । कथाकार भागिरथी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा कथाकार माया ठकुरी विशिष्ट अतिथि रहनुभएको थियो ।
समाजकी सचिव तारा के.सी.को सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. सत्यराज धपलिया, नियात्राकार मन्जु निरौला, प्रेसकाउन्सिल नेपालका सदस्य चेतनाथ धमला, योग गुरू केदारनाथ पाठक, लुनार स्कुलका प्र.अ.बलराम भट्ट, संसाक मासिकका सम्पादक उमेश पाण्डे, गोंगबुँ साहित्य समाजकी अध्यक्ष द्वारिका कुइकेल, जनार्दन अधिकारी धड्कन, अन्जना पौडेल, जसध्वज गुरूङ, राधा नेपाल, राजेश खोटाङ्गे, रबिन नेपाल, नारायण प्रसाद चौलागाई, दामोदर ढकाल, उतम विचार, सिद्वान्तराज प्रयास, प्रकाश सुवेदी, लक्ष्मी बस्नेत, सानु शर्मा, पदम दोङ्ग, बासु ठकुरी, भोलानाथ डल्लाकोटी, मिसन अधिकारी, दुर्लभ शाह त्यागी, बिनोद के . सी., दीक्षा भण्डारी, पृथक हिमाल ओली, अन्चल वान्तवा, विकास थापा, श्याम लिम्बु, टंकबहादुर खत्री, लगाएतका साहित्यकारहरूबाट आआफ्ना रचना वाचन गर्नुभएको थियो !
संस्थाकि कोषाध्यक्ष चन्दा न्यौपानेले कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको थियो । संसाक मासिकका सम्पादक उमेश पाण्डेले लेस्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।